zawwin maung says:
အရေးတော်ပုံကြီး အောင်ရမည် နိုင်ရမည်✊✊✊
Kyinan Htike says:
2021-07-24 at 7:30 PM
ပြောစရာ စကားလုံးတောင် မရှိပါဘူး သေမထူး နေမထူး ပြည်သူတွေ ရဲ့ ဘဝတွေရယ်ပါ
2021-07-24 at 7:36 PM
ခုချိန်မှာ ရာသီတုတ်ကွေးနဲ့ရောထွေးနေတော့ ကျန်းမာရေး လိုက်စားမှု့အားနည်းတဲ့တချို့ပြည်သူတွေကို ဘယ်လိုအခြေနေမျိုးမှာပဲ ဖျားဖျား လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကို သေသေချာချာ လမ်းညွန်မှု့ပေးကြပါ။
ခု အတော်များများ အိမ်လုံးကျွတ်ဖျားကြတယ် ကိုယ်လက်တွေ ကိုက်ခဲ
နှစ်ခါပြန်ဖျားကြတဲ့သူတွေ အတော်ဆိုးဆိုး ဝေဒနါ ခံစားကြရတယ်
2021-07-24 at 7:55 PM
2021-07-24 at 7:59 PM
စစ်ကြောရေးနဲ့ ထောင်တွေထဲကကလေးတွေအားလုံး အမြန်ဆုံးကယ်ထုတ်ပေးကြပါရှင်
Fighting ပါရှင် NUG all members
2021-07-24 at 8:32 PM
Thanks so much for doing what you can.
We're always supporting you,NUG.
2021-07-24 at 8:44 PM
အရေးတော်ပုံ အောင်ကို အောင်ရမည်✊👍
Thiri Shwe says:
2021-07-24 at 10:11 PM
2021-07-24 at 10:31 PM
Great Defense Civilians. I am support and stand with CRPH-CDM, NUG, PDF, KIA, KIO, KNLA, G-XYZ, etc… We are 8 unions peoples must be unite and together with fighting & remove for Terrorist Min Aung Hlaing's Fat Sit Tat and Da Lan. Don't photo, Don't post on Facebook, Don't interviews with any channel, ok? Keep fighting. God bless you all. Be Safe. Be Strong. Be Brave. We are peoples must win 100% sure!
A Yay Kyi Phy (all 8 Unions Peoples must be united) | A Lo Ma Shi (MILITARY COUP) | Kabar Ma Kyay Bu (We must clean and remove for all Min Aung Hlaing's Fat Sit Tat and Da Lan)| A Yay Taw Pyie Aung Ya Myue!
CRPH နဲ့ NUG မြန်မြန်လုပ်ပါတော့ စကစကို တိုက်စရာရှိတာတိုက်ပစ်လိုက်ပါဗျာ။ အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအတွက် Civil War is the best way to solve the problem of Federal Democracy in Myanmar. Otherwise no choice at all. Believe me! တကယ့်လုပ်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိတဲ့ PDF တွေကို KIA, KIO, KNLA, AA ..တပ်တချို့ သွားပေါင်း ပြီး ခေတ်မှီ လက်နက်.. နည်းပညာ.. အကူအညီပေးပါ.. PDF's Special Sniper လူမျာ:မျာ: မွေ: ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ PDF ညီအစ်ကိုများ ပျောက်ကျားစံနစ်ကို အသုံးပြုပါ | မျိုးချစ်တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမအပေါင်: တို့ရဲ့ ဘုံရန်သူဖြစ်သော စစ်ကောင်စီကို စုပေါင်းတော်လှန်ကြပါစို့ | အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်။ ပြည်သူ့အောင်ပွဲ နီးနေပြီမို့ အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် မအလ ရဲ့ အာရုံလွှဲခြင်းတွေကို အဓိက ရှောင်ကြပါ။
2021-07-24 at 10:32 PM
ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ Covid-19 ကို ပြည်သူတဦးချင်း ခုခံတွန်းလှန်ကြမှာပါ။ နိုင်ငံ တကာရဲ့ အကူအညီနဲ့ CDF တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ကိုဗစ်လူနာတွေအားလုံ: အမြန်ဆုံးပြန်ကောင်:ပြီ: မကြာခင် အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွာ:မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မအလ မင်းအောင်လှိုင် ICJ တတ်ရောက်ခြင်းမရှိပါ။ စကစ သတ္တိ မရှိပါ။
2021-07-25 at 12:58 AM
2021-07-25 at 2:28 AM
သေမထူးနေမထူးကငါတို့ပြည်သူ တွေမဟုတ်ဘူးခွေးမအလနဲ့ခွေးနောက်လိုက်တွေဘဲဒို့ပြည်သူတွေ ညီရဲ့လားဟေ့ခွေးလက်ထက်မှာဘာလို့အသေခံမလဲငါတို့လဲအဝေး ကနေတတ်စွမ်းသလောတ်ကူညီနေတယ်နော် ဒေါင်း သားနေကောင်းအသက်ရှည်ပါစေ
အစစအရာအရာ ဂရုစိုက်ပါ အကိုရေ
2021-07-25 at 5:17 AM
GREAT GREAT KO DAWN ,,,💯💯💯💯💯💯💯💯👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
Rivervale Dr says:
2021-07-25 at 5:51 AM
Lei Lei Win Hlaing says:
2021-07-25 at 12:56 PM
2021-07-25 at 2:30 PM
မင္းသား ေဒါင္း လည္းက်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ပါ
2021-07-25 at 5:23 PM
Ko jawni says:
2021-08-01 at 6:50 PM